Fampandrosoana an’i Madagasikara Tsy mety taitra ny fanjakana
Marobe ny dinika sy ny atrikasa efa vita teto Madagasikara nefa mbola miaina anaty fahantrana lalina hatrany ny Malagasy.
Navoaka indray tamin’ny farany teo ny tatitra nasionalin’ny fampandrosoana ny mahaolona sy ny vaindohan-draharahan’ny tanjon’ny fampandrosoana lovain-jafy. Matroka ny tarehimarika ary ahiana hatrany ny tsy ahatrarana ny tanjona. Aseho ireny rehetra ireny mba hanairana ny tompon’andraikitra, indrindra ny mpitondra, hoy ny mpahay toekarena miasa ao amin’ny tetikasan’ny firenena mikambana ho amin’ny fampandrosoana. Ny zavatra tsapa anefa dia toa rano atondraka amin’ny lamosin-gana izany ary ny fikarakarana atrikasa sy fangatahana famatsiam-bola hatrany no mahamaika. Efa mahamenatra mihitsy aza moa ny resaky ny mpamatsy vola sasany hoe firenena miankin-doha loatra amin’ny famatsiam-bola i Madagasikara. Ny atahorana dia ny hanidian’ireo mpamatsy vola ny paompiny eo ny farany ary izay vao tena taraiky ny firenena. Tsy misy intsony aloha ny zavatra antenaina amin’izao fitondrana izao fa ny amin’ny fanjakana manaraka eo angaha no mety mba ho taitra amin’ny tarehimarika ara-toekarena miiba sy latsaka isan’andro eto Madagasikara.